Kooxda Khaatumu-xun oo sii Dabar Go,aysa – Rasaasa News
“Hashu iyadaa Geela cuni iyadaana cabaadi” Calaamadahada munaafaqnimada ogow majaahidiintana waa lagu arkaaye.
Taa waxaan uga gol lee yahay waxay kooxda jwxo-shiil ku calaa cashay in dhiigoodii la banaystay iyaga oo muslimiin ah, waxaan xusuusinayaa kooxdan miyir daboolantay ee Jwxo-shiil in ONLF ay tahay urur xalaal ah iskaashina la leh ururada kale ee ka dagaalama Somalida Ogadeeniya, balse waxa la ugaadhsanayo waa kooxda khaatumu-xun ee sii dabar go,aysa ee uu hogaamiyo M.cumar.
Jawaabta oo waafi ah waxay noqonaysaa, mujrimiin ayaad tihiin waadna mudan tihiin in laydin laayo, sababta oo ah waxaad noqoteen ashahaado la dirir, waxaad la colowdeen cid kasta oo cadawga Abasiiniya col la ah xabadna ku ridaysa, waxaad ku colaa dinaysaan qofka Ogaadeeniyaan-ka ah ehludiin nimada.
Kooxda Khaatumo-xun waxay dhiiri galiyaan shuuciyada iyo gaala daba-dhoonimada iyaga oo saluugsan Islaam nimada, wxaana cadayn u ah dagaalkii ay lagaleen ururada ka dagaalama gudaha Ogaadeniya iyo arbushkii
ujeeda diisa lagaran waayay ee ay jubooyinka ka bilaabeen. Arintaa oo u muuqata haweenaydii xaabada qaadi wayday ee takale ku darsatay, Khaatumo-xun markii la waydiiyayna waxa dagaladan ku kalifay iyaga oo cadawgii u muuqdo, waxay ku jawaabeen islaam baa ka soo uraya ururadan.
Kol haday arintu sida tahay haleelooy, xujaduna idin ku oogan tahay arimahaa aan kor ku soo sheegayna aadan midna bee nin karin shacabka Ogaadeeniyana uu makhraati ka yahay. Sow ma is taahishaan in laydin laayo sidii Muuse Suudi iyo Qanyare?
Jawaabtu waa haa, waa uun in aad u adkaysataan rasaasta meel walba idinkaga furan inta aad ka dhimanaysaan.